အလောင်းတော်၏ တိရစ္ဆာန်ဘဝ ဖြစ်တော်စဉ် ဘုရားရှိခိုး (သို့) အဘယဇာတ အင်း - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
အလောင်းတော်၏ တိရစ္ဆာန်ဘဝ ဖြစ်တော်စဉ် ဘုရားရှိခိုး (သို့) အဘယဇာတ အင်း
Posted by ukkmaung on February 16, 2018 at 10:00am
ဘုရားအလောင်းတော်၏ တိရစ္ဆာန်ဘဝ ဖြစ်တော်စဉ် ဘုရားရှိခိုး
(သို့) အဘယဇာတ အင်း
ဘုရားအလောင်းတော် ပါရမီဖြည့်ကျင့်စဉ် တိရစ္ဆာန်ဘဝ၌ (၁၃၆)ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုတိရစ္ဆာန်ဘဝပေါင်း (၁၃၆)ဘဝကို ရှေးပညာရှိများက ကဗျာလင်္ကာဖြင့် စပ်ဆို မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါသည်။
ဖြစ်တော်စဉ် ဘုရားရှိခိုး လင်္ကာ။ ။
“ သြကာသ သြကာသ သြကာသ ဗုဒ္ဓကုင်္ရ၊ လောင်းမြတ်လှသည်၊ အစကြိုးကြာ၊ ဆယ့်ခြောက်ခါနှင့်၊ ဟင်္သာကိုးဖြစ်၊ ခြောက်ဖြစ်ကားခို၊ ကျီးညို သုံးခါ၊ သံသာကျူးထိပ်၊ ကရဝိက် ငါး၊ လေးကားကိန္နရီ၊ စာမရီဆယ့်ငါး၊ မျောက်ကားတဆယ်၊ ဆင်ဝယ်ဆယ့်တစ်၊ နွားဖြစ်ဆယ့်လေး၊ ဧကေး သိန္ဓဝ၊ ကျွဲ အဋ္ဌနှင့်၊ သံမြသာညောင်း၊ ဥဒေါင်း နှစ်ခါ၊ သာလိကာ သတ္တ၊ ဒွါဒသ ကြက်၊ ဝက်ကား ဆယ့်သုံး၊ ပေါင်းရုံးများစွာ၊ တရာသုံးဆယ်၊ ခြောက်ဖြစ်ဝယ်ကို၊ အန္တရာယ်မရှိ၊ ဘေးမထိသည့်၊ မုနိမြတ်လောင်း၊ ဖြစ်တော်ပေါင်းဟု၊ အောက်မေ့သဒ္ဓါ၊ ကြည်ညိုစွာဖြင့်၊ ခါခါမြတ်နိုး၊ လက်စုံမိုးကာ၊ ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။ “
ဤလင်္ကာအရ ဘုရားအလောင်းတော် ဖြစ်ခဲ့သော တိရစ္ဆာန်ဘဝများမှာ..
ကြိုးကြာ (၁) ၊ ခါ (၁၆) ၊ ဟင်္သာ (၉) ၊ ခို (၆) ၊ ကျီးညို (၃) ၊ ကရဝိတ် (၅) ၊ ကိန္နရီ (၄) ၊ စာမရီ (၁၅) ၊ မျောက် (၁ဝ) ၊ ဆင် (၁၁) ၊ နွား (၁၄) ၊ သိန္ဓော (၁) ၊ ကျွဲ (၈) ၊ ဥဒေါင်း (၂) ၊ သာလိကာ (၇) ၊ ကြက် (၁၂) ၊ ဝက် (၁၃) ၊ စုစုပေါင်း ဘဝပေါင်း (၁၃၆) ရှိပါသည်။
ဘုရားရှင်၏ ဘဝဖြစ်စဉ်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဇာတကပါဠိတော် အဋ္ဌကထာများတွင် ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း (၅၄၇) ရှိပါသည်။ ထိုဇာတ်တော်များသည် ပါရမီဖြည့်စဉ်က ဘဝများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုပြဆိုသည့် (၅၄၇) ဘဝထဲတွင် ပါရမီရင့်ချိန် ဘုရားဖြစ်ခါနီး ဆယ် (၁ဝ)ဘဝလည်း ပါသည်။ ထို(၁ဝ)ဘဝကို ‘‘ရင့်မှာ တစ်ကျိပ်’’ ဟုခေါ်သည်။ ကျန်သောဘဝ (၅၃၇)၊ (၅၄၇-၁ဝ=၅၃၇) ဘဝများကား ဘုရားဖြစ်ဖို့ ဝေးနေသေးသောကြောင့် ပါရမီနုသေးသည်ဟု ဆိုသည်၊ ထိုပါရမီနုစဉ်က ဘဝများကို မှတ်လွယ်အောင် ‘‘နုမှာ ငါးရာ’’ ဟု ဆိုပါသည်။ ဘုရားလောင်းဖြစ်ခဲ့ရသော တိရစ္ဆာန်ဘဝများသည်လည်း ပါရမီနုစဉ်က ဘဝများပင်တည်း။
ထိုသို့ ဘုရားလောင်းသည် တိရစ္ဆာန်ဘဝများတွင် ဖြစ်ခဲ့ရသော်လည်း ဘုရားလောင်း မဖြစ်နိုင်သော တိရစ္ဆာန်ဘဝများလည်း ရှိပါသည်။ 'ဘုရား ဧကန် ဖြစ်တော့မည်'ဟု ဘုရားတစ်ဆူဆူဆီက ဗျာဒိတ်ရသည့် ဘဝကစပြီး ငုံးအောက် သေးငယ်သော တိရစ္ဆာန်မျိုး၌ မဖြစ်နိုင်သလို ဆင်ထက် ကြီးသော တိရစ္ဆာန်မျိုး၌လည်း မဖြစ်နိုင်ပါပေ။ ထိုဘုရားအလောင်းတော်တို့ မဖြစ်နိုင်ရာ ဘဝအမျိုးအစား(၁၈) ခုရှိပါသည်။ (ဗောဓိသတ္တော ဣမာနိ အဋ္ဌာရသ အဘဗ္ဗဋ္ဌာနာနိ န ဥပေတိ)၊ အဋ္ဌာရသ အဘဗ္ဗဋ္ဌာန ဟုခေါ်သည်။ ထို (၁၈) ရပ်ကို သုတ္တနိပါတ် ခဂ္ဂ၀ိသာဏသုတ် အဋ္ဌကထာ နှာ (၄၅) တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
“ဘုရားလောင်းများ မဖြစ်နိုင်ရာ ဌာနများ”
ကန်း- ပင်း- ရိ- ဆွံ့၊ ရူး- ရိုင်း- ကျွန်၊ ဒိဋ္ဌ်-ပန်- သတ်- ငုံး- နူ၊
စက်- သုဒ်- ပါယ်-မာရ်၊ ပြိတ်နှင့်ပြန်၊ အမှန်ဆယ့်ရှစ်ယူ။
ယင်းအဋ္ဌာရသ်၊ ဗောဓိသတ်၊ လွတ်လွတ်ကင်းတော်မူ၊
နိပါတသုတ်၊ ပါဋ္ဌဂုတ်၊ ဖွင့်ထုတ်ကျမ်းထွက်ဟူ။ (ကင်းဝန်မင်းကြီး)
၁။ ကန်း = ဘုရားလောင်းသည် မျက်စိကန်းသူ အဖြစ် မမွေးဖွားခြင်း၊ (န ဇစ္စန္ဓော ဟောတိ)
၂။ ပင်း = ဘုရားလောင်းသည် နားပင်း ဆွံ့အသူ အဖြစ် မမွေးဖွားခြင်၊ (န ဇစ္စဗဓိရော ဟောတိ)။
၃။ ရိ = ဘုရားလောင်းသည် သွားရည် ရိယိုသော သူအဖြစ် မမွေးဖွားခြင်း၊ (န ဧဠမူဂေါ ဟောတိ)။
၄။ ဆွံ့ = ဘုရားလောင်းသည် ဆွံ့အ စကားမပြောတတ်သူ အဖြစ် မမွေးဖွားခြင်း၊ (န ပီဌသပ္ပီ ဟောတိ)။
၅။ ရူး = ဘုရားလောင်းသည် အရူး အနမ်းအဖြစ် မမွေးဖွားခြင်း၊ ( န ဥမ္မတ္တကော ဟောတိ)၊
၆။ ရိုင်း = ဘုရားလောင်းသည် လူရိုင်း အဖြစ် မမွေးဖွားရခြင်း၊ ( န မိလက္ခူသု ဥပ္ပဇ္ဇတိ)
၇။ ကျွန် = ဘုရားလောင်းသည် ကျွန်မျိုးတွင် မဖွားမြင်ရခြင်း၊ ( န ဒါသိကုစ္ဆိယာ နိဗ္ဗတ္တတိ)။
၈။ ဒိဋ္ဌ် = ဘုရားလောင်းသည် နိယတ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူရှိသူအဖြစ် မဖြစ်ရခြင်း၊ (န နိယတ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကော ဟောတိ)။
၉။ ပန် ( ပဉ် ) ဘုရားလောင်းသည် ပဉ္စာနန္တရိယ ကံ မလွန်ကျူးသူ ဖြစ်ရခြင်း၊ (န ပဉ္စာနန္တရိယ ကမ္မာနိ ကရောတိ)။
၁ဝ။ သတ် = ဘုရားလောင်းသည် အသညသတ် ဗြဟ္မာအဖြစ် မမွေးဖွားရခြင်း၊ (ရူပါဝစရေသု န အသညီဘဝေ)။
၁၁။ ငုံး = ဘုရားလောင်းသည် ငုံးအောက်ငယ်သော တိရစ္ဆာန်မျိုး၌ မဖြစ်ရခြင်း၊ ဆင်ထက်ကြီးသော တိရစ္ဆာန်မျိုးလဲ မဖြစ်ရခြင်း၊ (န တိရစ္ဆာနယောနိယံ ၀ဋ္ဋတော ပစ္ဆိမတ္တဘာဝေါ ဟောတိ)
၁၂။ နူ = ဘုရားလောင်းသည် နူနာ ရောဂါမဖြစ်ရခြင်း၊ (န ကုဋ္ဌီ ဟောတိ)။
၁၃။ စက် = ဘုရားလောင်းသည် စကြ၀ဠာတစ်ပါးသို့ ပြောင်း၍ မဖြစ်ရခြင်း၊ (န အညံ စက္ကဝါဠံ သင်္ကမတိ)
၁၄။ သုဒ် = ဘုရားလောင်းသည် သုဒ္ဒါဝါသဗြဟ္မာဘုံ၌ မဖြစ်ရခြင်း၊ ( န သုဒ္ဓါဝါသဘဝေသု ဥပ္ပဇ္ဇတိ)။
၁၅။ ပါယ် = ဘုရားလောင်းသည် အပါယ် ငရဲ၌မကျရခြင်း၊ အဝီစိငရဲနှင့် လောကန္တရိတ်ငရဲ၌ မဖြစ်ရခြင်း (န ဝီစိနိရယေ၊ န လောကန္တရိကေသု ဥပ္ပဇ္ဇတိ)
၁၆။ မာရ် = ဘုရားလောင်းသည် ကာမာဝစရဘုံတွင်းက မာရ်နတ် မဖြစ်ရခြင်း၊ (ကာမာဝစရေသု န မာရော ဟောတိ)။
၁၇။ ပြိတ် = ဘုရားလောင်းသည် ပြိတ္တာမျိုး၌ မမွေးဖွားရခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ ပြိတ္တာတွင် ခုပ္ပိပါသ၊ နိဇ္ဈာမတဏှိက မဖြစ်ရခြင်းနှင့် အသုရာတွင် ကာလကဉ္စိက မဖြစ်ရခြင်း၊ (န ခုပ္ပိပါသိက နိဇ္ဈာမတဏှိက ပေတေသု ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ န ကာလကဉ္စိကာသုရေသု)
၁၈။ ပြန် = လိင်ပြန်ရိုး မရှိခြင်း၊ ယောက်ျားဘဝ အမြဲဖြစ်ရခြင်း။ (နာဿ လိင်္ဂံပရိဝတ္တတိ)။
မှတ်ချက်။ ။ ဤအစဉ်သည် ကဗျာလင်္ကာအရ စဉ်ထားသော်လည်း အဋ္ဌကထာ အစဉ်နှင့်ကား ရှေ့နောက် အနည်းငယ် လွဲနေပါသည်။
‘ရင့်မှာတစ်ကျိပ်’ဟူသည် ဘုရားဖြစ်ခါနီး နောက်ဆုံး ပါရမီ ဖြည့်ကျင့်ရာ ဘဝဆယ်ခုကို ဆိုလိုပါသည်။ ထိုဘဝ ဆယ်ခုတို့၏ ဇာတ်ကြောင်း အစဉ်ကို အောက်ပါ လင်္ကာအကျဉ်းဖြင့် သိအပ်ပါ၏။
“တေ၊ ဇ၊ သု၊ နေ၊ မ၊ ဘူ၊ စန်၊ နာ၊ ဝိ၊ ဝေ” ဟု အစဉ်အလိုက်ဖြစ်အောင် အတိုကောက် မှတ်သားကြလေ့ရှိသည်။
၁။ တေ- တေမိယဇာတ်
၂။ ဇ- မဟာဇနကဇာတ်
၃။ သု- သုဝဏ္ဏသာမဇာတ်
၄။ နေ- နေမိဇာတ်
၅။ မ- မဟောသဓာဇာတ် (ပ၊ဒု)
၆။ ဘူ- ဘူရိဒတ္တဇာတ်
၇။ စန်- စန္ဒကုမာရဇာတ်
၈။ နာ- နာရဒဇာတ်
၉။ ဝိ- ဝိဓူရဇာတ်
၁ဝ။ ဝေ- ဝေဿန္တရာဇာတ်
မှတ်ချက်။ ။ “နုမှာငါးရာ ရင့်မှာတစ်ကျိပ်”တွင် ပါဝင်သော ဘုရားအလောင်း ပါရမီဖြည့်ကျင့်ရာ ဘဝများတွင် တိရစ္ဆာန်ဘဝပေါင်း များစွာရှိနေသော်လည်း ‘‘အစကြိုးကြာ၊ ဆယ်ခြောက် ခါနှင့်’’ ဆိုသော လင်္ကာများအရ တိရစ္ဆာန်ဘဝပေါင်း(၁၃၆)ကိုသာ ဆိုထားပါ၏။ အလောင်းတော်မြတ်၏ ပါရမီလမ်းတွင် ထင်ရှားသည့် တိရစ္ဆာန်ဘဝများစွာ ကျန်သေးကြောင်းကို ပိဋကတ်တော်ကြည့်လျှင် သိသာ၏၊ ဥပမာ-ယုန်မင်းတို့ ဖွတ်မင်းတို့လို ဘဝမျိုးဖြစ်သည်။
အဘယဇာတ အင်း (ဖြစ်တော်စဉ် အင်း)
ဘုရားအလောင်းတော်၏ တိရစ္ဆာန်ဘဝ ဖြစ်တော်စဉ် များစွာထဲမှ (၁၃၆)ဘဝကိုသာ ယူ၍ ဘုရားရှိခိုး လင်္ကာအဖြစ် အဘယ့်ကြောင့် ဖွဲ့ဆိုထားရသနည်း။ အချို့က ပဟေဠိသဖွယ် ဖြစ်နေကြ၏။ အမှန်မှာ.. ထိုဘုရားအလောင်းတော်၏ တိရစ္ဆာန်ဘဝ ဖြစ်တော်စဉ် ဘဝများစွာထဲမှ အဘယဇာတ= ဘေးအန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာမျှ မကျရောက်ဘဲ၊ အသက် အန္တရာယ် မကြုံရဘဲ၊ အေးအေးချမ်းချမ်းဖြင့် ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရသော (၁၃၆)ဘဝကိုသာ ယူ၍ လင်္ကာဖွဲ့ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် အဘယဇာတအင်း (ဖြစ်တော်စဉ်အင်း)တွင် အသုံးပြုရန် စီရင်ရန် အင်းဆန်အဖြစ် စနစ်ကျစွာ ဖွဲ့နွဲ့စီရင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စစ်ကိုင်းနယ်တွင်ရှိသော တောင်ဖီလာ ဘေးမဲ့တော၏ နယ်နမိတ်ကျောက်တိုင်ထက်၌ ထို`အဘယ ဇာတကအင်း´ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါ၏။ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးက ကျောက်တိုင်ထက်၌ ထို`အဘယ ဇာတကအင်း´ကို ထွင်းထု၍ တောင်ဖီလာတောကို နယ်နမိတ် သတ်မှတ်ပြီး ဘေးမဲ့တောအဖြစ် ကျောက်တိုင် စိုက်ထူသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘေးမဲ့တောအတွင်းရှိ တိရစ္ဆာန်များ အန္တရာယ်ကင်းအောင် နယ်နမိတ် ကျောက်တိုင်ထက်မှာ`အဘယဇာတကအင်း´ကို စီမံပြီ ထွင်းထုထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ရှင်တော်မြတ်စွာဘုရား ပါရမီဖြည့်စဉ်ကာလက ဘဝပေါင်း (၁၃၆)ဘဝတွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ ပါရမီဖြည့်ကျင့်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ကျန်ဘဝများ၌မူ အနှိပ်စက် အညှင်းပန်း ခံခဲ့ရရုံမျှမက အသက်ကိုပင် အန္တရာယ်ပြု ရန်ရှာခံခဲ့ရကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ထိုသို့အန္တရာယ်ကင်းသော (၁၃၆) ဘဝကိုရည်စူးပြီး``အစကြိုးကြာ ၁၆ ခါ´´အစချီသော ဘုရားရှိခိုး လင်္ကာကို ရှေးဆရာတို့ ဖွဲ့စီရင်ထားခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါ၏။ ထိုဘုရားရှိခိုးသော လင်္ကာကို အခြေပြုပြီး `အဘယဇာတကအင်း´ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ သို့မဟုတ် မူလကတည်းက ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် `အဘယဇာတကအင်း´အတွက် ရေးသားစီရင်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ပေါင်းရုံးများစွာ.တစ်ရာသုံးဆယ်ခြောက်ဖြစ်ဝယ်၌ အန္တရာယ်တစ်စီ ဘေးမရှိသည်.မုနိမြတ်လောင်း
ဖြစ်တော်ပေါင်းကို ညွှတ်ပျောင်းတုပ်ကွ.ပဏာမဖြင့် ကြည်ဆွသဒ္ဓါ ရှိခိုးပါ၏....။
ထိုဘုရားရှိခိုးလင်္ကာအရ ပါရှိသော ကိန်းဂဏန်းများကို အင်းကွက် (၁၆)ကွက်ထဲတွင် ရထားသွား နည်းဖြင့် အင်းဆံ သွင်းလိုက်ပါက`အဘယဇာတကအင်း´ရရှိပါသည်..။
ထူခြားချက်မှာ…အင်းဆံ(ကိန်းဂဏန်းများ)ကို အလျားလိုက် (ဘယ် ညာ) လေးကွက်ဖြစ်စေ...။ ဒေါင်လိုက် (အပေါ် အောက်) လေးကွက်ဖြစ်စေ...။ နီးစပ်ရာလေးကွက်ဖြစ်စေ..။ ပေါင်းလိုက်ပါက. အပေါင်းရလာဒ်မှာ (၃၄)ကိုသာ ရရှိခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်...။ အံ့သြဖွယ် ကောင်းပေစွ။
ဤ‘အဘယဇာတ’အင်းသည် ဘေးရန်အပေါင်း၊ ရန်အပေါင်း၊ အန္တရာယ်အပေါင်းတို့မှ ကင်းဝေး လွတ်မြောက်စေနိုင်သော လွန်စွာမှ အစွမ်းထက်သည့် အင်းဖြစ်ပါသည်။ သွားလေရာ ယူဆောင်သွားပါက ဘေးရန်ကင်းပြီး အန္တရာယ်ရှင်းကြောင်းကို သာဓကများစွာ ပြနိုင်ပါသည်။
နေအိမ် ဘုရားစင်၌ ထားပါကလည်း အတွင်းရန် အပြင်ရန်များ မကျရောက်နိုင်ပါ။ ပယောဂ၊ စုန်းပူး၊ သရဲပူးများကိုလည်း ထို`အဘယဇာတကအင်း´နှင့် ကုသနိုင်ပါသည်။ မကောင်းဆိုးဝါးများကို လွန်စွာ နိုင်လေသည်။
အရှင်ဥက္ကံသ သာသနတက္ကသီလ မဟာဓမ္မာစရိယ M.A. (Buddhism)